कोरोनाभाइरस प्रदर्शनमा सहभागी हुनका लागि नेपालले विदेशी पर्यटकलाई देश निकाला गर्ने छ - Sushil Silwal
Unit 1 Professional Education
Lesson 1 Occupation and Education
Lesson2Medium and Higher-Level Profession.
Unit2Employment, Training and Education
Lesson 1 International Employment
Lesson2Medium and Higher Level Education Organizations
No Comments on कोरोनाभाइरस प्रदर्शनमा सहभागी हुनका लागि नेपालले विदेशी पर्यटकलाई देश निकाला गर्ने छ
जुन १५, २०२०, १०::३१ बिहान ET
काठमाडौं – कोरोनाभाइरस प्रकोपप्रति सरकारको प्रतिक्रियाको विरोधमा सहभागी भएपछि नेपालले ५ जना विदेशी पर्यटकलाई फिर्ता पठाएको छ र उनीहरूलाई हिमालयनमा प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाउनेछ, अधिकारीहरूले सोमबार भने।
राजधानी काठमाडौंमा शनिबार आयोजित सडक प्रदर्शनको क्रममा पुलिसले तीन चिनियाँ नागरिक र एक जनालाई संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया र नर्वेबाट पक्राउ गर्यो।
प्रदर्शनकारीहरूले राम्रो संगरोध सुविधाहरू, र अधिक परीक्षण र पारदर्शिताको लागि मेडिकल आपूर्ति खरीद गर्न कोओभिड १ को माग गरे, यो उपन्यास कोरोनाभाइरसको कारण अत्यधिक संक्रामक श्वसन रोग हो।
नेपालको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार के.सी.ले भने, चिनियाँ र यु.एस. पर्यटकलाई १०,००० नेपाली रुपैयाँ ($८२.७५ डलर) जरिवाना गरिएको छ। अस्ट्रेलियालाई त्यो भन्दा दोब्बर जरिवाना लागेको थियो किनभने उसले विरोधको तस्वीर पनि खिचेको थियो।
“पाँचैजनालाई नेपाल प्रवेश गर्न दुई बर्षको लागि प्रतिबन्ध लगाइनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएपछि उनीहरूलाई आ-आफ्ना देशहरूमा पठाइनेछ” उनले रोयटर्सलाई भने। नेपालले उसको कोरोनभाइरस लकडाउनको रूपमा जुलाई ५ सम्म सबै उडानहरू स्थगित गर्यो।
अर्का अध्यागमन अधिकृत रामचन्द्र तिवारीले भने कि विदेशीलाई उनीहरूको पर्यटक भिसाको दुरुपयोग र प्रदर्शन जस्ता राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएकोमा दण्डित गरिएको थियो।
कोरोनाभाइरस संक्रमणको दोस्रो केस पत्ता लागेपछि नेपालले मार्चमा लकडाउन लगायो। यो संख्या बढेर 6,२११ संक्रमण र १९ व्यक्तिको मृत्यु भयो।
← जर्मनीले ठूलो नयाँ उत्तेजक स्प्लर्जको एक हिस्साको रूपमा इलेक्ट्रिक कारहरूको लागि नगद प्रदान गर्यो → विवादित सीमामा चीनसँगको झडप पछि २० भारतीय सैनिकको मृत्यु
Send Gifts for Valentine’s Week
Join, Promote and Earn
PurchaseaGift Certificate for Your Loved and Closed Ones for this New Year
Social Business: COVID-19 Response
© 2022	Sushil Silwal